I-COVID-19 Ngenkathi isesabekayo, izikhathi zobunzima eminyakeni edlule ziye zagqugquzela ezinye zezinto ezisungulwe kakhulu emlandweni ezisasetshenziswa nanamuhla. Kusuka kwi-ambulensi eyenziwe ngeNkathi Ephakathi ukusiza abezokwelapha ukuthi bafike futhi bathuthe iziguli ngokushesha, ukuze babambe i-tape ngesikhathi seWWII besiza amasosha ukulungisa abahlomayo ...
Njengenhlangano yezokuhwebelana eyengeziwe, iChina Mold Manufacturers Association nayo isungule amaphrojekthi ahlose ukuheha isizukulwane esisha. Namuhla, ukuqasha isizukulwane esilandelayo sabasebenzi sekube yinto ephambili kubakhiqizi baseChina. Ngiyazi ukuthi lokhu kuzwakala ...
I-gel silica gel isifinyeziwe njenge-LSR, okuwumkhiqizo ongathandwa ngabathengi nabakhiqizi. I-gel silica gel yenziwe ngemikhiqizo ye-silica gel. Inokunwebeka okuhle, ukumelana namanzi nomswakama, futhi ayizweli ku-asidi, i-alkali nezinye izinto zamakhemikhali. Ngokuvamile u ...
Plastic Inaliti Ukubumba
Ukufunda inqubo yokubumba umjovo wepulasitiki kungakucindezela ekuqaleni. Inkampani yakho sekuphele amasonto, izinyanga noma mhlawumbe ngisho neminyaka yocwaningo nentuthuko ukuklama umkhiqizo omusha, omusha kakhulu futhi ophumelelayo. Uqala ukumba ujule futhi uhlele ukuthi umkhiqizo wakho ...
Ngabe Ukhetha Okufanelekile Kwezingxenye Zakho Zepulasitiki?
Ukukhetha into efanelekile yanoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo kubalulekile ukukhulisa ukusebenza nenzuzo yomkhiqizo. Ungabheki nje ukuthi umsebenzi wokugcina womkhiqizo wakho uyini. Qiniseka ukuthi uyazi ukungena nokuphuma kokuthi leyo ngxenye izosetshenziswa kanjani nokuthi izothintana nani ...